ပွတ်တောက်ပသော Glazed Vitrified Tiles (PGVT / GVT) ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
နည်းပညာ။ spec ။
ပို့ကုန် to ရိယာ
ပွတ် glazed vitrified ကြွေပြား ထုံးနည်း ကေြာက်လူး ကြံစည်ပြုလုပ်တတ်သော
နေအိမ် စုပေါင်းငွေသွင်းခြင်း ပွတ် glazed vitrified ကြွေပြား
GVT TILES ဆိုတာဘာလဲ။
ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိဖန်ခွက်များ (GVT) သည်အဓိကအားဖြင့် 90% ဖန်ခွက်နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြွေထည်များဖြစ်သည်. ဤသည်မှာ0ံအားလျင်မြန်စွာအပူပေးရန်ခွင့်ပြုသည်, ၎င်းသည်ရာသီဥတုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။.
PGVT TILES ဆိုတာဘာလဲ။
အရောင်အသွေးစုံလင်သည့်အကူးအပြောင်း (PGVT) အတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အဓိကအားဖြင့် 85% ဖန်နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းများကိုအဓိကပါဝင်သောကြွေထည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်. ဤသည်မှာ0ံအားလျင်မြန်စွာအပူပေးရန်ခွင့်ပြုသည်, ၎င်းသည်ရာသီဥတုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။.
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ : GVT သည် 90% ဖန်ခွက်နှင့်စိုစွတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။ PGVT သည် 85% ကိုအသုံးပြုသည်။.
အအေးပေးခြင်း : GVT ထက် PGVT tile အတွင်းရှိ tile sure ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအေးစေနိုင်သည်.
အပူ : PGVTS ၏မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအပူပေးနိုင်သည်,.
အထူ : အထူသည် PGVT ကြွေပြားများထက် GVT TILES တွင်နှစ်ဆပိုများသည်.
longevity နှင့်ကြာရှည်ခံ : PGVT tile ၏သက်တမ်းသည်ပိုမိုကြီးမားသည်, သို့သော် PGVT tile တစ်ခု၏ကြာရှည်ခံခြင်းသည် GVT Tile အတွက်ထက်နည်းသည်s
အရွယ် : စျေးကွက်တွင် GVT ကြွေပြားအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် PGVT tile ကိုအရွယ်အစားအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်.
လေှျာက်လွှာ : ပြင်ပသို့မဟုတ်မိုးလုံလေလုံရည်ရွယ်ချက်များအတွက် tile ကိုသုံးနိုင်သည်.
သင်၏အိမ်တွင် GVT သို့မဟုတ် PGVT TILES များအတွက်မည်သည့်အရာကပိုကောင်းသနည်း။
သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရောင်များ, ပုံစံများနှင့်စျေးနှုန်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်. GVT TILES သည် PGVTS ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလာသည်။.
PGVT TILES သည် GVT ထက်စျေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ငွေသည်စိုးရိမ်မှုဖြစ်လျှင် PGVT TILES သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်.
GVT နှင့် PGVT TILES ကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
သင်၏ GVT နှင့် PGVT ကို သုံး. ရေချိုးခန်း, ရေချိုးခန်း,. ဤကြွေပြားများအားလုံးသည်ကြာရှည်ခံ။ မျက်စိကိုနှစ်သက်သည်. အကယ်. သူတို့က vitripified ကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုကနေလုပ်လို့ရတယ်။. ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသန့်ရှင်းတဲ့, မီးဖိုချောင်ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးခန်းထဲမှာသန့်ရှင်းတဲ့,
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်သင်၏မီးဖိုချောင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သင်သည်သင်၏နေရာနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စတိုင်ပေးလိုလျှင်ဤသည် tile ကို! ငါတို့မှာမတူညီတဲ့အရောင်တွေအများကြီးရှိတယ်,. သင်၏မီးဖိုချောင်နေရာသို့မဟုတ်သင်၏မီးဖို၏နောက်ခံအတွက်ပင်ပန်းသောအရွယ်အစားရှိသောအုပ်ထိန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်သည်။
ရေချိုးခန်းသည် GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများကိုကြွယ်ဝစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်သည်. အကယ်. သင်သည်သန့်ရှင်းသော, ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကြည့်ရှုလိုပါကဤအရာများသည်သင့်အတွက်ကြွေပြားများဖြစ်သည်. သူတို့သည်သင်၏ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်နံရံများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. သူတို့ကိုသင်ခန်းစာအနည်းငယ်ပေးရန်ရေချိုးခန်းထဲတွင်လည်းသင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များစွာဖြင့်လာကြသောကြောင့်သင်၏အခြားအသုံးအဆောင်များကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏ living ည့်ခန်းတွင် GVT နှင့် PGVT tiles များကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်. သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်စတိုင်လ်များ၌လာသည်ကိုသင်၏တိကျသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသောအရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်လူနေမှုနေရာ၏ကြမ်းပြင်ကိုမဆိုပိုမိုခံစားခွင့်နှင့်လှပသောအသွင်အပြင်ကိုပေးသည့်အုတ်မြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်.
အကယ်. သင်သည်သင်၏နေရာကိုဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာမည့် tile တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက GVT နှင့် PGVT TILES သည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်သင်၏စင်္ကြံအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကများစွာသောအရောင်အသွေးစုံလင်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုသင်၏အိမ်၏အရောင်အစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီရန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆိုးရွားလှတဲ့ကြွေထည်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကြာရှည်ခံမှုဟာသဘာဝကျောက်တုံး,.
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်သင်၏ပြင်ပအာကာသအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. သူတို့ဟာတာရှည်ခံပြီးမျက်စိကိုဆွဲဆောင်နိုင်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်, သို့မှသာသင်သည်သင်၏စတိုင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ fit ပါလိမ့်မည်ဟုရွေးချယ်နိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများရရှိနိုင်ပါသည်။:
အောက်ဖော်ပြပါကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများရရှိနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသော finishes နှင့်ပတ်သက်။ collection များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်:
glossy gvt / pgvt ကြွေပြားများ အလွန်လှပသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရသည်. ၎င်းကိုအဖြူ, အနက်ရောင်, အစိမ်းစသည်တို့ကဲ့သို့အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်. တောက်ပသောကြွေပြားများသည်၎င်း၏တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လူကြိုက်များပြီးအိမ်အလှဆင်ခြင်းကိုမည်သည့်အိမ်အလှဆင်မှုကိုမဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်. တောက်ပသော GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်, အချို့မှာအချို့မှာ
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများကိုအများအားဖြင့်ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများ, စီးပွားဖြစ်တည်ဆောက်မှုများအပြင်အိမ်များအဖြစ်အသုံးပြုသည်.
တောအုပ်နှင့် PGVT TILES အစဉ်အလာအရသဘာဝကျောက်တုံးပစ္စည်းနှင့်အတူလုပ်ပေမယ့်ဒီနေ့သူတို့ကိုဒြပ်ပစ္စည်းများမှဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. သူတို့ဟာများသောအားဖြင့်ကြော့ရှင်းတဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်ကိုသုံးပြီးလှပတဲ့ matte အသွင်အပြင်ကိုသုံးပြီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုနဲ့တူတယ်,.
The ဖဲ သင်၏အိမ်သို့စွဲမှတ်ခြင်းနှင့်လှပသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောမျက်လုံးချင်းဖမ်းယူခြင်းနှင့်လှပသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သငျသညျ Sheen နှင့်အတူသိမ်မွေ့သောအရာတစ်ခုခုကိုသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်တောက်ပတောက်ပသောတောက်ပမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ကြွပ်များသည်အရောင်များစွာဖြင့်လာသည်, ထို့ကြောင့်သင်၏အိမ်အတွက်စုံလင်သောအရာတစ်ခုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT Tilvt Tilvt Tilvt Tilvt Tilvt Tilvt Tilvt Tilvs တို့တွင်ဖဲသည်သင်၏ရေချိုးခန်းကိုသစ်သားကဲ့သို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ Classy ကြည့်ရှုလိမ့်မည်. ဤကြွေပြားများသည်အစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုစိုစွတ်သောနေရာများတွင်ကုတ်ခြစ်ခြင်းနှင့်ဆပ်ပြာများဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ. သို့သော်၎င်းသည်သင်၏မီးဖိုချောင်, ထမင်းစားခန်းသို့မဟုတ်သက်ရှိ area ရိယာရှိဤကြွေပြားများ၏အလှအပကိုသင်မရရှိနိုင်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။
The သစ်သား finish ကို GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများ နှစ် ဦး စလုံးကြွေ၏လုပ်နေကြသည်. ထိုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်မှာ GVT နှင့် PGVT Tilvt Tiles တို့တွင်အလင်းရောင်အညိုရောင်သစ်သားအရောင်များရှိပြီး၎င်းသည်သဘာဝကျောက်တုံးများနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာရှိသည်. ဤစတိုင်သည်သင်ပိုမိုရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ကိုလိုချင်သောမီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းကဲ့သို့သောနေရာများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်
သစ်သား finish သည် GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်သဘာဝကျောက်တုံးများထက်အရောင်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။. ဤ GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများ၏အညိုရောင်အသွင်အပြင်သည်၎င်းကိုမြေကြီးခံစားချက်များကိုလည်းကောင်း,. ဒီစတိုင်သည်တတ်နိုင်သမျှ Eco-Friendly ဖြစ်လိုသူများကိုမကြာခဏကိုက်ညီသည်.
သစ်သား finish ကို GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများကိုလူနေအိမ်ရာများ၌အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်းစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုကြသည်။. ဤပုံစံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT TILES ထုတ်ကုန်များထဲမှအကောင်းဆုံးရောင်းသူဖြစ်သည်. အညိုရောင်အညိုရောင်သစ်သား texture သည်များသောအားဖြင့်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်လူဖြူများကဲ့သို့သောပိုမိုပေါ့ပါးသောအရောင်များနှင့်ကောင်းစွာကိုက်ညီလိမ့်မည်.
The သကြား finish ကို ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးအလွှာနှင့်အတူ coated ကြောင်းတောက်ပ, မြင့်မားသောတောက်ပသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကမင်းရဲ့အုပ်ကြွိတက်တွေပေါ်မှာရနိုင်တဲ့ဇိမ်ချိုသာမှုအကောင်းဆုံးပါ. ဤရွေ့ကားအချောကိုရရှိရန်ဤအချောကိုအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်တောက်ပသောအလွှာသုံးခုကိုပေါင်းစပ်ထားလေ့ရှိသည်. ပထမ ဦး ဆုံးအလွှာသည် Glossy မျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားရန်အက်စစ် - စွဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်သည် Gold Flakes သို့မဟုတ်အခြားသတ္တုအမှုန်များ,. ထိုအခါကြွေပြားများသည် acrylic ၏အဖြေတစ်ခုတွင်ဗလာကျင်းပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပိုလီအမူအရာနှင့်အတူတံဆိပ်ခတ်ထားပြီး,.
၎င်းသည်လှော်မြည်သောနေရာများရှိသည့်နေရာများအတွက်ဤအရာကိုအလွယ်တကူခြစ်နိုင်ပြီးခြစ်ရာများကိုအလွယ်တကူခြစ်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းကိုအကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ. ဤအကြောင်းကြောင့်, living ည့်ခန်းများသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းများကဲ့သို့သောအလတ်စားများသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းများကဲ့သို့သင်တစ်ချိန်လုံးဖိနပ်များနှင့် ပတ်သတ်. လမ်းလျှောက်မည်မဟုတ်သည့်အလတ်စားများသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းများကဲ့သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဤ finish အမျိုးအစားသည်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးကန်၌သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုမြင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်၎င်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအရည်အသွေးကြောင့်ရေချိုးခန်းများတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်
အကယ်. သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးဆုံးခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ကိုသင်လိုချင်ပါကဤ tile အမျိုးအစားသည်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်. သို့သော်သင်၏တာရှည်ခံမှုကိုရှာဖွေနေပါကပြန့်နှံ့မှုများနှင့်ခြစ်ရာများအပေါ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ
မြင့်မားသောတောက်ပသော GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများ: မြင့်မားသောတောက်ပသောအုပ်ထိန်းများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသော finish ကိုရှိသည်. တောက်ပသောမျက်နှာပြင်သည်ထိတွေ့မှုနှင့်ချောမွေ့သည်, အစွန်းအထင်းခြင်းသို့မဟုတ်ခြစ်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။. ဤဂုဏ်သတ္တိများသည်သူတို့ကိုလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်သင့်လျော်သည်.
GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများရှိသည့်အရောင်များကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ
vitrified ကြွေပြားနှင့်အတူအရေးအပါဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား အရောင်ဖြစ်ပါတယ်. လူအချို့ကမီးခိုးရောင်ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ အခြားသူများသည်အညစ်အကြေးသို့မဟုတ်ပန်းရောင်ကဲ့သို့အချို့သည်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ကဲ့သို့သောမှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုမှီခိုနေရသည်. GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများ၏အရောင်သည်သူတို့မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်နှင့်အညီကွဲပြားနိုင်သည်, သို့သော်အဓိကအားဖြင့်ဤအရောင်များသည်အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အလင်းအိုဝါဆို,. အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ပတ်သက်သော collection များကိုပေးသည်:
အဖြူရောင်သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြွေပြားများအတွက်အသုံးအများဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်စတိုင်လ်တွင်ရှေးရိုးစွဲတွင်0င်ရောက်ခြင်းနှင့်ခေတ်သစ် Chic မှသံမဏိမှအလှဆင်ထားသောအစီအစဉ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်.
Black GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်လူကြိုက်များခြင်းမဟုတ်ပါ,. ဤ GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်ရိုးရှင်းသော decor နှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းတွင်ရှိသောအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ် Eggier ခံစားမှုရှိရန်လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်.
Light Beige သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သူများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်,. ၎င်းသည်ကလေးများသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆက်မပြတ်ယိုဖိတ်ခြင်း,.
မှောင်မိုက်သောအဝါရောင် GVT နှင့် PGVT TILES တို့သည်နေရာတစ်ခုသို့နွေးထွေးမှုကိုထည့်နိုင်သည်. ၎င်းသည်အခြားမှောင်မိုက်သောအရောင်များကို၎င်းတို့အလှဆင်ထားသောအစီအစဉ်တွင်အခြားသောမှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်
Grey GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများသည်ကြားနေတန်ချိန်အားလုံး၏အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။. မီးခိုးရောင်အရောင်သည်အမှုအရာများကိုမကြာခဏပြောင်းလဲလိုကြသည်။ သူတို့ကနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရဘဲအရောင်အသစ်များထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းကိုလိုချင်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
အနီရောင်သည်အဖြူသို့မဟုတ် beige ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆန္ဒများကိုလိုချင်သောသူများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအရောင်ဖြစ်သည်။. Red GVT နှင့် PGVT Tiles များသည်သင်၏အိမ်သို့အရောင်များကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်.
အကယ်. သင်သည် Earthy ကိုရှာဖွေနေပါကခေတ်မီဆန်းပြားသောအသွင်အပြင်သည်အညိုရောင်သည်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ဒီအရောင်အသံသည်မီးခိုးရောင်တန်ချိန်များနှင့်အလွန်အမင်းရဲရင့်ခြင်းမရှိဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်.
ရွှေကြီးမားသော formated tile သည် bersple နှင့်ပိုမိုစွန့်စားမှုရွေးစရာဖြစ်သည်. တစ်ခါတစ်ရံတွင်မည်သည့်အခန်းထဲတွင်မဆိုကြော့ရှင်းသောခံစားချက်တစ်ခုဖန်တီးရန်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT ကြွေပြားများရရှိနိုင်သောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး:
ကျွန်ုပ်တို့၏ GVT နှင့် PGVT TILES များကိုကမ်းလှမ်းသောအဓိကအရွယ်အစားသုံးခုရှိသည်:
ကြှနျုပျတို့မှာ bluezone vitrified Pvt.Ltd., GVT နှင့် PGVT TILES ထုတ်ကုန်များ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူ. သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သို့မဟုတ်သင်လည်း email လည်းအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် : info@bluezonevitrified.com24 နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဖြေပါမည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
2022 အားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲ Light Link Solutions
မင်္ဂလာပါ WhatsApp တွင် chat လုပ်ရန်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ရန်အောက်ဖော်ပြပါကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုနှိပ်ပါ info@bluezonevitrified.com